ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လှုပ်ရှားမှု | portal │ပညာရှင် Hans Kottke
ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျမြို့တော်ဝန် – ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျမြို့တော်ဝန်
ရေဒီယို Okerwelle တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာပရိုဂရမ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ခဲ့သည် “ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျမြို့တော်ဝန် – ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျမြို့တော်ဝန်” ကိုစလှေတျ.
ဇွန်လ 26, 2018 | မိမိအ Kottke | Tags:: နျူကလီးယားလက်နက်တွေဖျက်သိမ်း, ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လှုပ်ရှားမှု, မိဿဟာယမူဝါဒချမှတ်, ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ, ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျမြို့တော်ဝန်, ရေဒီယို Okerwelle.
categories: 2018, Braunschweig, နောက်ခံ, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
Ostermarsch 2016 Braunschweig အတွက် …
March 27th, 2016 | မိမိအ Kottke | Tags:: Braunschweig, ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လှုပ်ရှားမှု, မိဿဟာယမဟာမိတ်အဖွဲ့, ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ, Ostermarsch.
categories: 2016, ယေဘုယျ, Braunschweig, ဗီဒီယို | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
ရေဒီယို Okerwelle မှာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ: ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လှုပ်ရှားမှု (shipment 3) …
ဒါက ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ Braunschweig e.V. အပေါ်တစ်ဦးအသစ်စီးရီးစတင်သည် ရေဒီယို Okerwelle မိဿဟာယအလုပ်၏လယ်ပြင်၌အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများအပေါ်.
ဒီနေရာမှာကိုထုတ်လွှင့်များ၏အသံဖမ်း (ဒါပေမယ့်လှပတဲ့သီချင်းတွေကိုမပါဘဲ – GEMA!)
လိုက်လျှောက်ရန်လစဉ်ကြားကာလ၌ သာ. ပြပွဲ!
podcast: အသစ်င်းဒိုးထဲမှာ Play | ဒေါင်းလုပ် () | embed
ဇူလိုင်လ 26, 2012 | မိမိအ Kottke | Tags:: Braunschweig, ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လှုပ်ရှားမှု, ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ, ရေဒီယို Okerwelle, shipment 3.
categories: 2012, ယခု, ယေဘုယျ, Braunschweig | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
“ငွိမျးခမျြးရေးပိုစတာလိုအပ်ပါတယ်, အိပ်မက်, အမြော်အမြင်နှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်း”, Manfred Kemper ကပြောပါတယ်. သူကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ Braunschweig e.V. နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအလုပျအတှကျပိုစတာ created. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းတစ်ဦးသို့မဟုတ် Braunschweig ၌သူ၏လည်ပင်း၌တစ်ဦးစာတန်းများချိတ်ဆွဲထားသည်မတိုင်မီသူ့ကိုမြင်နှစ်ခုရှိပါတယ်. အဆိုပါငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာများ၏အာရုံများမှာ: မိဿဟာယယဉ်ကျေးမှု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ, ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ငြိမ်းချမ်းရေးအလုပ်ကို, အကြမ်းမဖက်ခြင်းနှင့်သည်းခံမှုမြှင့်တင်ရေး, လက်နက်နှင့်စစ်ပွဲများအပေါ်ပြန်ကြားရေး, ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒအကိစ္စများမှပို့ချချက်များနှင့်ပြပွဲ. Manfred တစ်အလှူငွေနဲ့သူ့ရဲ့ပိုစတာစေသည်.
အဆိုပါငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာငြိမ်းချမ်းရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ Brunswick ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. Manfred liebensürdigerweiseငါ့ကိုထုတ်ဝေသူ့ပိုစတာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေးတော်မူပြီအဖြစ်, ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်၌ထားတော်မူ၏. အဆိုပါစီးရီးပြည့်စုံပါလိမ့်မည်…
ရေဒီယို Okerwelle အပေါ်အင်တာဗျူးတွင် Manfred Kemper ၏လုပျငနျးတင်ဆက်ခဲ့သည်.
ရေဒီယို Okerwelle အပေါ်အင်တာဗျူးထံမှကောက်နှုတ်ချက်ကိုအောက်တွင် 104,6
ဝမ်းနည်းဖွယ်သတင်း: Manfred Kemper *3.3.1943, အပေါ် 6.3.2019 သေဆုံးသော. အောက်မေ့လွမ်း Manfred Kemper အတွက်
podcast: အသစ်င်းဒိုးထဲမှာ Play | ဒေါင်းလုပ် (8.2MB) | embed
ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2012 | မိမိအ Kottke | Tags:: ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လှုပ်ရှားမှု, မိဿဟာယမဟာမိတ်အဖွဲ့, ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ, Manfred Kemper, ပိုစတာများ.
categories: 2012, ယခု, ယေဘုယျ, Braunschweig, အတတ်ပညာ | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
Ostermarsch 2011 Braunschweig အတွက် …
ရေဒီယိုထုတ်လွှင့် Okerwelle အပေါ်တစ်ဦးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း 104,6 အီစတာ * Actions မှ 2011 Braunschweig အတွက် (ဂီတမပါဘဲ)
အဆိုပါ Ostermarsch သည်ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှု၏နိုင်ငံရေးဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်, အဘယ်သူ၏ဇစ်မြစ်ကိုပြန် 1950 ခုနှစ်ဗြိတိသျှတို့နျူကလီးယားဆန့်ကျင်ဖို့သွားကြ. 1960 ရဲ့အစမှာအီစတာချီတက်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းဂျာမဏီ၏ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံမှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်.
အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲကိုသီးသန့်အစပိုင်းတွင်ခဲ့ “နျူကလီးယားမဆိုကြင်နာ၏လက်နက်များနှင့်သောလူမြိုးဆန့်ကျင်” အရှေ့နှင့်အနောက်အတွက်. နောက်နှစ်အတွက် ပို. ပို. လူအလမ်းပိုမိုနေရာတွေမှာအီစတာအားလပ်ရက်သွားလေ၏, နျူကလီးယားလက်နက်များအားအဆုံးသတ်နှင့်စစ်အေးတိုက်ပွဲနှစ်ခုစလုံးစခန်းများအတွက်နျူကလီးယားလက်နက်ပြိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်သရုပ်ပြ.
Erich Kuby နဲ့တူနာမည်ကြီးတွေ, ရောဘတ် Jungk, Erich Kaestner, Helmut Gollwitzer နှင့် Bertrand ကစယ်လှုပ်ရှားမှုလာရောက်ပူးပေါင်း.
သင့်ရဲ့ဒုတိယစန်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီ 1979-83 ဘူတာရုံအတိုမှနျူထရွန်ဗုံးဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲနှင့် "နေတိုးကို double-လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်" အတွက်- နှင့်အလတ်စား-range ကိုနျူကလီးယားလက်နက်များဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံ. 1983 အကြောင်းယူ 700.000 ပြည်သူ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ရပ်တွေအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်. တောင်မှအီစတာကို upswing ပါဝင်ခဲ့သောအခြိနျကာလ marches.
အရှေ့နှင့်အနောက်အကြားစစ်အေးတိုက်ပွဲ၏အဆုံးကတည်းကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလှုပ်ရှားမှု၏လုပျငနျးအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွား. Transboundary ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအလုပ်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုကိုလယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်. ဤအချိန်အတောအတွင်းပစ္စုပ္ပန်အထိကငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှု၏သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်တောင်းဆိုချက်များကိုအီစတာချီတက်ပွဲအပေါ်ပေးအပ်ခဲ့စီစဉ်ထားလှုပ်ရှားမှုများပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ.
Ostermarsch လှုပ်ရှားမှု 2011 Braunschweig အတွက်
မကြာသေးမီနှစ်များတွင် Braunschweig အတွက်နေရာ ယူ. , အီစတာကာဗွန်ဈေးကွက်အရပ်ပေါ်မှာတစ်ဆန္ဒပြပွဲနှင့်အတူချိတ်ဆက်ထားတဲ့မြို့တော်ကိုတဆင့်တစ်ဦးစက်ဘီးချီတက်ပွဲ၏ပုံစံ marches. ယခုနှစ်ဆိုင်ကယ်ချီတက်ပွဲအီစတာစနေနေ့ကစတင်သည်, ကို 23. ဧပြီလ, တစ် 11:00 ကာဗွန်စျေးကွက်အပေါ် clock နှင့် Schlossplatz ပေါ်မှာသငျ့သ​​ညျပထမဦးဆုံးသေးငယ်တဲ့အရေးယူအချက်များ, နိုင်ငံတော်ပြဇာတ်နှင့် Magnikirchplatz ထွက်ဆောင်သွားစေ. နောက်ဆုံးချီတက်ပွဲမှာကျင်းပခဲ့ကြလိမ့်မည် 12:50 clock အစားကာဗွန်ဈေးကွက်.
1. ဖူကူရှီးမားကသတိပေး: နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံများ off! အားလုံးနျူကလီးယားလက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရပါမည်!
2. အီရတ်, အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့လစ်ဗျားသတိပေး: စစ်ရေးမပဋိပက္ခတွေဖြေရှင်းဖို့!
ဒေါင်းလုပ် ဗီဒီယို သို့မဟုတ် MP3,
ရှေ့က 25 အနှစ်ဓါတ်ပေါင်းဖိုဘေးဥပဒ်ကိုချာနိုဘိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့, ဧရိယာဂျာမဏီလူသူမနေသောတဝက်အရွယ်အစားကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးဘယ်မှာ.
ဂျပန်၌ဖူကူရှီးမားမှာနျူကလီးယားဘေးအန္တရာယ်ယခုချာနိုဘိုင်းကဲ့သို့အလားတူလုံခြုံရေးအဆင့်အတွက်ခွဲခြားထားပါတယ် (level 7). ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းအခွအေနေထွက်သည်နှင့်အမျှမသိရသေးပါဘူးဖြစ်ပါသည်. နျူကလီးယားစွမ်းအင်၏ကျန်နေတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည် - လည်းဖြစ်သောကြောင့်ရေဒီယိုသတ္တိကြွစွန့်ပစ်၏ unexplained စွန့်ပစ်ခြင်းများ - ခန့်မှန်းမရ.
တစ်ခုတည်းသောလမ်းထွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, အားလုံးနျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံများကို disable!
"အငြိမ်းချမ်းသော" နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုဖို့လည်း, သူတို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်းလွယ်ကူစွာနျူကလီးယား-နိုင်စွမ်းပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်, လောကီသားတို့သည်မိဿဟာယထိခိုက်နစ်နာမှုများ.
နျူကလီးယားလက်နက်တွေအဖြစ်ကြေညာခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းရပါမည် - ဓာတုနှင့်နျူကလီးယားလက်နက်များအပေါ်ကွန်ဗင်းရှင်းဆင်တူ, ရှိပြီးသားဟုတ်ပါတယ်တည်ရှိသော.
10 အာဖဂန်နစ္စတန်၌စစ်၏နှစ်ပေါင်းပြရန်, ဒီနေ့ပဋိပက္ခမရှိတော့စစ်ရေးအရဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်ကြောင်း. ယူဂိုဆလားဗီးယား, အီရတ်စစ်ပွဲအမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုး၌အခွအေနအေအဖြစ်ကောင်းစွာဒီအတည်ပြုရန်.
တည်ဆဲစစ်ပွဲများအဆုံးသတ်ရပါမည်. အဆိုပါ Bundeswehr နိုင်ငံခြားမစ်ရှင်မှစလှေတျတျောမဖြစ်ရပါမည်.
စစ်ပွဲနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းမဖြစ်ရပါမည်, လစ်ဗျားနိုင်ငံမှာမဟုတ်သလိုအာဖဂန်နစ္စတန်မှာမဟုတ်! ဗုံးနှင့်ဒုံးကျည်နှင့်အတူလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာလုံခြုံကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်လူ့အသက်တွေကိုမဖျက်ဆီး.
သင်တန်းကျနော်တို့လူတို့နှင့်အတူသွေးစည်းညီညွတ်မှုရှိကြ၏, အခမဲ့အဘို့မိမိတို့ဘဝနှင့်၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်, လူမှုရေးအရမယ့်အိမ်ကဒီမိုကရေစီမဝင်ရနှင့်.
ယခုပထမဦးဆုံးပြင်သစ်နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံကလစ်ဗျားနိုင်ငံမှာစစ်ရေးအရကြားဝင်နှင့်တစ်ဦးမျှမ the-fly ဇုန်ပြဋ္ဌာန်းရန်ချင်သည်. အခုတော့နေတိုးတပ်ဖွဲ့စစ်ပွဲခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်. တဖန်သင်တို့ဆူညံဖြစ်ဖို့ရှိသည်ကတည်းက. နေတိုးတပ်ဖွဲ့စစ်အေးတိုက်ပွဲ၏ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နေဆဲအနောက်တိုင်းမဟာမိတ်အကျိုးစီးပွားကိုကိုယ်စားပြု,သူတို့ရဲ့ကနဦးတွန့်ဆုတ်လည်းထို့ကြောင့်နေတိုးတပ်ဖွဲ့ကိုသိလျက်နှင့်.
Artikel အတွက် 39 ကုလသမဂ္ဂ၏ပဋိညာဉ်စာတမ်းလုံခြုံရေးကောင်စီကစစ်ရေးအရအရေးယူဘို့အခြေအနေများကိုချရေးသားထားပါတယ်: လုံခြုံရေးကောင်စီမှတ်စုများ, ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်စေကျူးကျော်ငြိမ်သက်ခြင်းသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်၏ပြိုပျက်ရာသည်; အကြံပြုချက်များကိုဖြစ်စေလျက်, သို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရကြလိမ့်မည်, ဆောင်းပါးများနှင့်အညီကိုအဘယ်အတိုင်းအတာ 41 နှင့် 42 သိမ်းယူခံရဖို့ရှိပါတယ်, ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ် restore မှ.
ဆောင်းပါး 41: လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်, အဘယျသို့အစီအမံ – လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း – သိမ်းယူခံရဖို့ရှိသည်, ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်များမှ effect ကိုပေးစေခြင်းငှါ,; သူကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များလိုအပ်နိုင်ပါသည်, ဤသူအစီအမံအကောင်အထည်ဖော်ရန်. ဒါတွေကစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများ၏ပြည့်စုံသောသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြတ်တောက်ပါဝငျနိုငျ, ရထားလမ်းအားဖြင့်, မြင်- နှင့်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး, der ပြီးဆုံးပြီးနောက်အကဲဖြတ်, ကွေးနနျးစကျ- ရေဒီယို, နှင့်ဆက်သွယ်ရေး၏အခြားနည်းလမ်းများနှင့်သံတမန်ဆက်ဆံရေး၏ပြင်းထန်မှု, Include.
ဆောင်းပါး 42: လုံခြုံရေးကောင်စီစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်, အပိုဒ်အတွက် 41 စီစဉ်ထားတဲ့အစီအမံမလုံလောက်ပါလိမ့်မည်သို့မဟုတ်လုံလောက်မှုမရှိဖြစ်ထင်ရှားပြကြပြီ, သူလေကြောင်းရန်ပေးစေခြင်းငှါ, မြင်- သို့မဟုတ်မြေတပ်ဖွဲ့များနိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးအစီအမံကိုထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ် restore လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါရန်. သင်သည်တတ်နိုင်ဆန္ဒပြ, လေကြောင်းခရီးဖြင့်ပိတ်ဆို့နှင့်အခြားစစ်ဆင်ရေး, မြင်- ကုလသမဂ္ဂ၏အသင်းဝင်များ၏တပ်ဖွဲ့များပါဝင်သည်သို့မဟုတ်မြေ.
အဖွဲ့ UN-Libyen-ဆုံးဖြတ်ချက် Die 1973 တစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်ဆန့်ကျင်အကြမ်းဖက်မှုအများဆုံးကျယ်ပြန့်ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်ပါသည်, လုံခြုံရေးကောင်စီပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကတည်းကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သော. ကုလသမဂ္ဂဟာသူ့ရဲ့ 66 နှစ်အရွယ်သမိုင်း၌သာဒုတိယအကြိမ်အဘို့, New York မြို့အတွင်းလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတိုင်းပြည်ဆန့်ကျင်နီးပါးမရှိသောစစ်ရေး coercive အစီအမံများအသုံးပြုခြင်းအခွင့်အာဏာပေးခဲ့သည် (ထိုစစ်ဆင်ရေးနိုဝင်ဘာလကို authorize ပထမဦးဆုံး Ma က LWAR 1990 ကူဝိတ်၏ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ရဲ့သိမ်းပိုက်ဆန့်ကျင်).
ထို့အပြင်ကောင်စီခွင့်အာဏာ “ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ, ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်မဟာမိတ်ဖွဲ့၏အခြေအနေတွင်အရပ်သားများနှင့်အရပ်သားဒေသများကာကွယ်ပေးရန်လိုအပ်သမျှအတိုင်းအတာယူအမျိုးသားရေးသို့မဟုတ်, တစ်ဦးတိုက်ခိုက်၏အန္တရာယ်, ဘန်ဂါဇီအပါအဝင်“. ဒါကလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်များကိုတစ်ဦးဗုံးဖောက်ခွဲမှု၏ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်လစ်ဗျားစစ်လေယာဉ်သို့မဟုတ်ရဟတ်ယာဉ်အားဖြင့်သာဆိုလိုသည်, no-ယင်ကောင်ဇုန်ချိုးဖောက်, ဒါပေမယ့်လည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကကဒါဖီ၏အစိုးရတပ်များနှင့်ယင်းတို့၏င့်ကားများဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်မြေထဲပင်လယ်အတွင်းရှိလစ်ဗျားသင်္ဘောများဆန့်ကျင်. ဖော်ပြမှသာဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာပယ်သည် “လစ်ဗျားပိုင်နက်အပေါ်မည်သည့်မျိုးသိမ်းပိုက်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဘူတာရုံ“.
ထိုဆုံးဖြတ်ချက်၏ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ 1973 , လုံခြုံရေးကောင်စီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်းချိုးဖောက်. လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ကြားဝင်ဖြန်ဖြေဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတားမြစ်ချက်များနှင့်နယ်မြေပိုင်နက်သမာဓိအာမခံ၏ပုံစံအတွက်စတိတ်၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုချိုး.
လူ့အခွင့်အရေးအငြင်းအခုံအကြိမ်ကြိမ်ကျြောစောထငျရှားတွန်းဖြစ်ပါတယ်. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူဦးရေ၏ဤဆင်ခြေစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပါ - နဲ့ဆန္ဒ, စစ်ပွဲဆင်နွှဲရန်, ကြီးထွားလာ.
ယခုနှစ်အတွက်ကိုဖီအာနန်အားဖြင့်အားပေးအားမြှောက် 2000 "ကုလသမဂ္ဂမှာဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ပါမှတာဝန်ယူမှု" (R2P) နိယာမ – “ကာကွယ်ပါမှတာဝန်ယူမှု” ထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုအဖြစ် - ဆိုးရွားသောလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများဆန့်ကျင်ကလူ, စစ်ရာဇဝတ်မှု, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နှင့်တိုင်းရင်းသားသန့်စင်ဆန့်ကျင်ပြစ်မှုများ - ဆွေးနွေးကြသည်. ထိုတွင် 2005 နယူးယောက်ရှိကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာထိပ်သီးအစည်းအဝေး, လောကီသားအတွက်အားလုံးနီးပါးနိုင်ငံပေါင်းအားဖြင့် P2R ကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာခဲ့ 1674 လုံခြုံရေးကောင်စီကပထမဦးစွာတရားဝင် binding စာရွက်စာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောဦးဆောင်. ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုတရားဝင်စံဖို့ R2P အတွက်ရှိမရှိ, ဒါပေမဲ့အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်.
အဲဒီမှာကတည်းကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားအကျပ်အတည်းများ၏စီးရီးအတွက် 1990 R2P> ကုလကြားဝင်ဖြန်ဖြေ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအတွင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု: အီရတ်, ဆိုမာလီယာ, ဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီးနားနှင့်, မာကေဒေါနိ, ဟေတီ, Ost-အရှေ့တီမော, ဆီယာရာလီယွန်, လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ, DRKongo - Kaum ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး: ရဝမ်ဒါ , Srebrenica, ဒါဖော - နေတိုး-ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေး: ကိုဆိုဗို. ဒါပေမယ့်အရာကလူ့အခွင့်အရေးစံချိန်စံညွှန်းသို့မဟုတ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလွန်ခဲ့သော R2P ကို​​မြင်, သောအသေးစိတျအခိုင်အမာသို့မဟုတ်ယန္တရားများ? ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတန်ဖိုးများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများအတွက်နေတိုးမစ်ရှင်မ, သောလူသား၏မြေတပြင်လုံးကထောက်ခံတစ်ခုသို့မဟုတ်စစ်ရေးစွက်ဖက်မှုများကအခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားလာကိုမျှော်လင့်ဖွယ်ရှိသည်နေကြတယ်?
လစ်ဗျားဥရောပအရေးပါသောရေနံကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည် (10%). အပြင်, နက်နဲသဲကန္တာရအောက်အရပ်ဓာတ်ငွေ့သိုက်များနှင့်လည်းမကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိကြီးမားသောရေချိုလှောင်ကန်ရှိပါတယ် (အနာဂတ်၌အရေးကြီးသော).
ကဒါဖီရေနံစက်မှုလုပ်ငန်းပြည်သူပိုင်သိရသည်ကိုလည်းနိုင်ငံခြားအခြေစိုက်စခန်းများပိတ်ထား. သူသည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်၏ရှည်လျားသောအာဏာရှင်အဖြစ်ရယူရန်ခဲ့ - အားလုံးနိုင်ငံရေးသမားတွေသိထားပေမယ့်, ဒါကြောင့်ကောင်းစွာလစ်ဗျားနိုင်ငံမှာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့အမိန့်ပေးမကြောင်း. လက်နက်ပေးပို့ဖို့ပမာဏအီတလီနိုင်ငံကနေကဒါဖီလက်ခံရရှိ 110 ယူရိုသန်း, အထူးသဖြင့်တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းများအတွက်, အကွောငျး 80 မော်လ်တာကနေပစ္စတိုနဲ့သေနတ်နဲ့များအတွက်ယူရိုသန်း, အကွောငျး 53 ဂျာမဏီကနေယူရိုသန်း, အဓိကအားဖြင့်အီလက်ထရောနစ် jamming ကိရိယာများများအတွက်, မိုဘိုင်းအသွားအလာမှ, အင်တာနက်နှင့် GPS စနစ်ကိုလေဖြတ်, နှင့်ပြင်သစ်ထက်ပိုမိုနှင့်အတူ hit 30,5 ယူရိုသန်း, ကျော်နှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံ 25,5 ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူယူရိုသန်းနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ 22 ယူရိုသန်းစံချိန်တင်. အမည်မသိဖြစ်ပါသည်, တရုတ်နိုင်ငံမှအဘယ်လစ်ဗျားနိုင်ငံ, Nord-ကိုရီးယားနိုင်ငံ, အီရန်, ဆီးရီးယားနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဆည်းပူးနိုင် (ထို).
ဂျာမဏီကကဒါဖီရန်လက်နက်များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်သင်တန်းများကောက်ယူခဲ့သည်. အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတခုလုံးကရန်လက်နက်များနှင့်စစ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပို့ကုန်အမြဲတမ်းချက်ချင်းရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ရမည်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်နက်ပို့ကုန်ပိတ်ပင်ထားမှုဆီသို့ဦးတည်တဲ့ပထမခြေလှမ်းအဖြစ်.
အာဖရိကသမဂ္ဂသည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်းအာဏာရှင်မွမ်မာကဒါဖီ၏တပ်များနှင့်အတူအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတခုအစပျိုးသိမ်းယူခဲ့, ကဒါဖီသဘောတူခဲ့. အဆိုပါအစီအစဉ်မှာပါတီများအကြားတစ်ဦးကိုချက်ချင်းအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအာမခံခဲ့သည်, စတင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု, လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးများအတွက်စင်္ကြံဖွဲ့စည်း, နှင့်ဆန့်ကျင်နေတိုးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြီးစီး.
ကဒါဖီကဒီအစီအစဉ်ကိုရန်သဘောတူပြီးနောက်, ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဘန်ဂါဇီမှအာဖရိကသမဂ္ဂမှခရီးထွက်, အတိုက်အခံများ၏ခိုင်ခံ့ကျော်. အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင်ဘန်ဂါဇီမှာပိုထက်တဲ့တထောင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုအားဖြင့်လက်ခံရရှိခဲ့သည်. ဤရွေ့ကားကဲ့သို့သောကြွေးကြော်သံများကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည် "ကဒါဖီ၏နှုတ်ထွက်စာမပါဘဲတစ်ဦးကငြိမ်းချမ်းရေးကိုမဖြစ်နိုင်ချေ"မှသည်. အတိုက်အခံအုပ်စုများ၏ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး, သောကကဒါဖီ၏တန်ခိုးတော်နှင့်သူ၏မိသားစုများ၏အဆက်အဘို့ကိုထောက်ပံ့ပေး. လစ်ဗျားလူမျိုး၏ပင်မဝယ်လိုအားကိုပြည့်စုံကဒါဖီ၏ disempowerment နှင့်သူ၏စစ်အစိုးရကိုဖြစ်ပါသည်. ဤ AU နဲ့များ၏လတ်တလောအဆိုပြုချက်များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမခံခဲ့ရ.
အာရပ်နိုင်ငံများအတွက်ငယ်ရွယ်သည့်လူဦးရေ၏ရှယ်ယာအလွန်မြင့်မားသည်. ဒီတော့ဆင်တဲ z.B. 75 ထက်အသက်ငယ်အယ်လ်ဂျီးရီးယား၏ရာခိုင်နှုန်းက 30 အနှစ်, ထက် ပို. 20 သူတို့ထဲကရာခိုင်နှုန်းကိုအဘယ်သူမျှမအလုပ်ရှိ.
တစ် Youtube ကိုဗီဒီယိုထဲမှာငါအလံကိုစာဖတ်ခြင်းကိုမြင်လျှင်: "သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုမသတ်နိုင်ပါ - ငါတို့သည်ပြီးသားသေဆုံးပါပဲ!"ငါသည်ပုန်ကန်မှု၏ပြည့်စုံနားလည်မှု, အာရပ် States မှာအထူးသဖြင့်လူငယ်များ.
သို့သော်အာဏာရှင်ကနေလွတ်မြောက်မှုနိုင်ငံခြားစစ်ရေးစွက်ဖက်မှုများကသတ်မရရမယ်. အာရပ်လူဦးရေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသာဗဟိုမှာဖြစ်သင့် (အဘယ်သူမျှမကနိုင်ငံခြား) နှင့်သံတမန်ရေးမှတဆင့် (တသမတ်တည်းပိတ်ဆို့မှု) ထောက်ခံနေကြတယ်.
ထိုအခါကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနောက်ဆုံးတွင်၎င်း၏မူဝါဒကိုအတွက်အစား preemptively ပဋိပက္ခနှင့်ဤမှတ်စု၏ဒေသများရှိလူ့အခွင့်အရေးကိုခုခံကာကွယ်သူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ခြင်းရပ်တန့်သင့်. အာဏာရှင်တွေနဲ့အာဏာရှင်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမလုပ်ဆောင်နိုင်, သူတို့ထဲကတယောက်အကျိုးခံစားခွင့်ရရန်မျှော်လင့်နေရင်တောင်.
ချာနိုဘိုင်း * Actions:
25 ချာနိုဘိုင်းပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း – နောက်ဆုံးတွင်နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံများပိတ်ပစ်!
အီစတာတနင်္လာနေ့တွင်, အစားကွဲပြားခြားနားသောနေရာဒေသမှာမတူကွဲပြားသောကျတ်လုပ်ရပ်တွေနှင့်အတူ Braunschweiger Land နှင့်ဒေသတွင်း၌အမျိုးမျိုးသောမှတ်တိုင်များမှာအစည်းအဝေးတွေအတူလုပ်ရပ်တွေကိုရှာတွေ့.
တဦးတည်းရပ်တန့်ကနေစီစဉ် Kreisverband Braunschweig လက်ဝဲ 11:00 ထို Frankfurt, တရားရုံးအပေါ် clock.
ထိုအခါငါတို့စက်ဘီးသွားသို့မဟုတ်ငှားရမ်း. ထို Konrad သတ္တုတွင်းမှာဗဟိုဆန္ဒပြပွဲမှကားဖြင့်.
အဲဒီမှာချီတက်ပွဲမှာစတင်သည် 14:00 နာရီ.
podcast: အသစ်င်းဒိုးထဲမှာ Play | ဒေါင်းလုပ် (19.5MB) | embed
ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလ 13, 2011 | မိမိအ Kottke | Tags:: "ကာကွယ်ပါမှတာဝန်ယူမှု"(R2P), * Actions 25 ချာနိုဘိုင်းပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း, နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံများ off, နျူကလီးယားလက်နက်တွေဖျက်သိမ်း, Braunschweig, ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လှုပ်ရှားမှု, မိဿဟာယမဟာမိတ်အဖွဲ့, စစ်ရေးအရပဋိပက္ခများကိုဖြေရှင်းရန်မ, လစ်ဗျားနိုင်ငံ, Ostermarsch 2011, ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်း.
categories: 2011, ယခု, ယေဘုယျ, Braunschweig, နောက်ခံ | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
အဘယ်သူသည်သန့်ရှင်းသောဘုရားမြေကိုပိုင်ဆိုင်? ပါလက်စတိုင်းပဋိပက္ခအပေါ်အတှေး …
ဣသရ – သန့်ရှင်းသောဘုရားမြေ. ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာပါလက်စတိုင်းနှင့်ယုဒလူတို့အကြားအခြေအနေပိုမိုထောက်ပြ. ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူး, အဆိုပါပဋိပက္ခ၏သမိုင်းနောက်ခံဘာတွေလုပ်နေလဲ?
သန့်ရှင်းသောဘုရားမြေအတွင်းရှိပဋိပက္ခ (PDF ဖိုင်ရယူရန်)
ငါကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုဖန်ဆင်းပြီးသေးငယ်တဲ့ script ကိုဖန်တီးပါတယ်, အဘယ်အရာကိုပါလက်စတိုင်းအခြေအနေသမိုင်းကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို lit.
ရဲ့ contents ထံမှ:
ဦးအုန်း’ Scheu ရိုးရှင်းစွာမြင့်တက်
ငါ. အဘယ်သူသည်အဟောင်းကို Orient ပိုင်?
II ကို. ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ဇာတ်လမ်းကို
III ကို. ခရစ်ယာန်တွေဟာနှင့်သန့်ရှင်းသောမြေများတွင်မွတ်စလင်များ
V ကို. ဗြိတိသျှ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်
အဆိုပါ Nakba - ပါလက်စတိုင်း၏ပျံသန်းမှုများနှင့်ထုတ်ပစ်ခြင်း 1948 (PDF ဖိုင်ရယူရန်)
ငါ၏အဇာတ်ညွှန်း၏ epilogue ထံမှ:
အချိန်ကို ca ကိုထံမှယေဇကျေလ၏စာအုပ်ထဲတွင်. 600-560 v. Chr ။,
"ဒါပေမယ့်သင်က, ဣသရေလအမျိုး၏တောင်များ, နောက်တဖန်အစိမ်းရောင်ရကြလိမ့်မည်
ငါ၏လူဣသရေလအမျိုးသားတို့အဘို့နှင့်အသီးထွက်ကုန်များ; ဒါကြောင့်မကြာမီနောက်ကျောလာကြလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ...
ငါသည်ဣသရေလအမျိုး၏ပြည်သို့အိမ်မှာသင်ဆောင်ကြဉ်း ... "
ရပ်ရွာတစ်ဆက်ဆံရေးရုံးအဖြစ် Talmud နှင့်အတူ.
Orient နဲ့ Occident အကြား Bindeglied, ကအမြဲယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံခဲ့သည်.
ဟုတ်ကဲ့ - သူသည်သန့်ရှင်းသောမြေကိုပိုင်ဆိုင်?
နှင့် fait accompli ကိုဖန်တီးရန်.
ဒီ script ကိုရဲ့အဆုံးမှာငါ့အအယူခံဝင်:
ငွိမျးခမျြးရေးမယ့်သီလဖြစ်ပါတယ်, စိတ်ကိုတစ်ပြည်နယ်, ကောင်းမြတ်ခြင်းတဲ့သဘောထားကို, ယုံကြည်မှု, တရားမ္တွ ... ",
ဇန်နဝါရီ 23, 2011 | မိမိအ Kottke | Tags:: 2011, အာရပ်, ငြိမ်းချမ်းရေးဆုသူ Work, ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လှုပ်ရှားမှု, ဂါဇာ, သမိုင်း, ဣသရ, ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်, Jewry, Nakba, ပါလက်စတိုင်း, Zionism.
categories: 2011, ယခု, ယေဘုယျ, နောက်ခံ | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
Von einem “Krieg ohne Gnade” sprach Israels Verteidigungsminister Ehud Barak. Während dieses Krieges wurden 1.434 Palästinenser getötet und weitere 5.303 verletzt, viele von ihnen auf grausame Weise verstümmelt. Auch setzte Israel international geächtete Waffen wie Phosphor- und DIME-Granaten ein. အများထဲတွင် 960 toten Zivilisten waren ein Drittel Frauen und Kinder (288 Kinder und Jugendliche sowie 121 Frauen). Auf israelischer Seite starben 13 လူထု, davon3Zivilisten, 84 wurden verletzt.
Der Krieg hat im Gaza-Streifen ein Bild der Zerstörung hinterlassen mit 4.000 zerstörten und 21.000 beschädigten Häusern einschließlich Schulen und Krankenhäusern, Gebetshäuser, Universitäten, Regierungs- und andere öffentliche Gebäude. Die Infrastruktur wurde nahezu völlig zerstört. Nicht offen sichtbar sind die traumatisierten Menschen, vor allem die Kinder. ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO က) schätzt, dass zwischen 20.000 နှင့် 50.000 Menschen durch die Angriffe Langzeitschäden davongetragen haben.
ဒေါက်တာ. Ute Lampe, Friedensbündnis Braunschweig
Frieder Schöbel, ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ Braunschweig
Dr.med. S က. Tarmassi, Deutsch-Palästinensischer Verein Braunschweig
Höre, höre, ဣသရ !
သည် PS: Hier ein ausführlicher Bericht zur Lage in Gaza von Physicians For Human Rights – ဣသရ (english)
January 19th, 2011 | မိမိအ Kottke | Tags:: 2011, Braunschweig, Deutsch-Palästinensischer Verein, ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လှုပ်ရှားမှု, မိဿဟာယမဟာမိတ်အဖွဲ့, ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ, ဂါဇာ, အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်, Mahnwache, လူ့အခွင့်အရေး.
မနေ့ကကျနော်အနေဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အဖြစ်အပျက်တက်ရောက်ခဲ့သည် ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ Braunschweig အကြောင်းအရာပေါ် “ဣသရေလအမျိုးနှင့်ပါလက်စတိုင်းဘို့ငါတို့တာဝန်ကဘာတွေလဲ? ဒေသတွင်းဣသရေလအမျိုး၏တာဝန်ကဘာလဲ?”.(ထောက်ပံ့: ဒါက der TU, IPPNW, Attac, DGB)
Ute ဆီမီးခွက်များကအဲဒို Medicks ဆွေးနွေးတင်ပြတည်းဖြတ် (အစ္စရေးထွ-ညှပ် Basatzungssoldat, ဓာတ်ပုံဆရာ), Joachim Hempel (Domprediger) နဲ့မိုက်ကယ် Kleber (DGB ဒေသကြီးဥက္ကဋ္ဌ) စင်မြင့်ပေါ်. အဖွင့်ကြေညာချက်ထဲမှာ Hempel အရှေ့တိုင်းနှင့်ဥရောပယဉ်ကျေးမှု၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏အရေးပါမှုကိုတင်ပြ. ကော်ယခင်အရှေ့ဂျာမဏီကနေလာအမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးအကြိမ်ပေါင်းများစွာသွားရောက်ခဲ့ပြီး, သူအတွက် Histadrut ပြည်ထောင်စုမူဘောင်တွေနဲ့အများဆုံးအဆက်အသွယ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဘယ်မှာ. သူကတကယ့်ခဲ့ “ဣသရေလအမျိုး၏ပန်ကာ”, သောကွဲပြားခြားနားလူငယ်ဖလှယ်မှုနှင့်လူကြီးများအလုပ်အားဖြင့်ရလဒ်. သူကယဉ်ကျေးမှုကိုချစ်သောသူနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်း၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဝေဖန်. Medicks, နှင့် 29 နှစ်ပတ်လည်အတွက်အသက်အငယ်ဆုံး, အများအားဖြင့်သိမ်းပိုက်ထားသောနယ်မြေထဲမှာ, သူ့သုံးနှစ်စစ်မှုထမ်းခဲ့ (ဂိုလန်ကုန်းမြင့်သောအရပ်) abgeleistet. သူသည်ဣသရေလအမျိုး၌အနှစ်ဆစံထောက်ပြ: တလက်ပေါ်ကိုယ်နှိုက်သည်ဣသရေလအမျိုးကိုကြွေးကြော်, အနောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီဖြစ်, အခြားတစ်ဖက်တွင်ဣသရေလအမျိုးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်ကုလသမဂ္ဂ၏လိုအပ်ချက်များကိုချိုးဖောက်. ၏7သန်းမြို့သားတို့နထေိုငျ5အလုပ်အကိုင်အောက်မှာသန်း. သူကအလေးပေး, ကြောင်းနိုင်ငံရေးအထံတော်သို့သာလျှင်အလယ်တန်းအရေးပါမှုသည်, သူ့အဘို့, လူများ၏လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေစင်တာမှာမတ်တပ်ရပ်.
ဣသရလေ Hempel အလေးပေးဥရောပအတွက်ပြည်နယ်နှင့်အရှေ့မှာရှိတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်မဟုတ်ပါဘူး. ဣသရလေအရှေ့အလယ်ပိုင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သင့်ကြောင်း. အထူးသဖြင့်ဣသရေလအမျိုး၏လူများ၏နေ့စဉ်ခွအေနကေိုဖိနှိပ်ဖြစ်ပါသည်: လှုပ်ရှားမှုရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုအလွန်ကန့်သတ်, အချိန်ခွဲတမ်းအဖြစ်ကန့်သတ်မယ့်နယ်နိမိတ်, လူများနှင့်အထူးသဖြင့်လူငယ်များအဖြစ်ထိုအုတ်ရိုး, အရာနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရှိကောင်းသောကျောင်းများရှိ, အခြေအနေကမကျေနပ်ဖြစ်ကြ. ဆရာတော်ဒေါက်တာများ၏ရွေးချယ်မှု. Munib တစ်ဦးက. အဆိုပါသမ္မတအဖြစ်ဂျော်ဒန်ထံမှ Younan လူသာရင်ကမ္ဘာ့ဖလားအဖွဲ့ချုပ် ပြသ, ချာ့ချ်၏အရေးပါမှုကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်အကျပ်အတည်းယူ.
Kleber ကပြောပါတယ်, ထို့အပြင် DGB အတွက်လိုက်ဖို့ပွင့်လင်းဝေဖန်ဖော်ပြနိုင်ရပါမည်. အဆိုပါ Histadrut အထူးပြည်ထောင်စုဖြစ်ပါသည်. သငျသညျပြီးသား created 30 အစ္စရေးပြည်နယ်တည်ထောင်ခဲ့နှစ်ပေါင်းမတိုင်မီ. တစ်ဦးကအထူးသဖြင့်ပြဿနာအာရပ်လူဦးရေရဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးရှိပါတယ်. ဤတွင်အဆိုပါ DGB နေဆဲသည်သူ၏ဝေဖန်မှုများလည်းသတိထားခဲ့.
Medicks betonte, မလူတိုင်းအတွက်, သူအစ္စရေးအစိုးရဝေဖန်, အလိုအလျှောက် anti-ဆီးမိုက်ဖြစ်ပါသည် – တိုတောင်းတဲ့ဆားကစ်, ဣသရေလအမျိုးသည်အားဖြင့်ကျင့်သုံးနဲ့တူ. ဣသရေလအမျိုးသည်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်ဝေဖန်ခွင့်ပြုရမည်ဖြစ်သည်! အထူးသဖြင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုးများထက်တစ်ဦးချင်းစီပါတီများကိုထောက်ပံ့မှတက်ကဖို့ဖြစ်တယ်, အဆိုပါဟုတ်ကဲ့အများစုလာတာတွေဟာအစ္စရေးနိုင်ငံခဲ့ကြသည်.
ဂျာမနီနှင့်ဣသရေလအမျိုးတို့အကြားအဆိုပါအထူးဆကျဆံရေးမစ္စတာ Hempel အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်. ယုံကြည်မှု၏ဂျာမန်ရိုးအမြစ်အကြောင်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင် created မည်ဖြစ်ကြောင်း. သို့သော်အမေရိကန်မပါဘဲဣသရေလအမျိုးကိုအလျှင်းမ running. လွတ်လပ်သောဂျာမန်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ၏မေးခွန်းကိုအခန်းထဲမှာခဲ့သည်…
ဒါကြောင့်ဣသရေလအမျိုး၏မူဝါဒများသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ကွန်ကရစ်လုပ်ရပ်များမှရောက်လာသောအခါ (အခြေချနေထိုင်မှု…) သို့ သွား., ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကိုကိုယ်စားပြုဟောပြော. အဆိုပါ DGB အတွက်အများစု၏အရေးပါသောအမြင်အမှန်ပင်ရှိပါသည်, ဒါပေမယ့်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိသမဂ္ဂများအနေဖြင့်အဖြစ်သပိတ်မှောက်, Australien u.a. ကောက်ယူခဲ့ကြ (ထုတ်ကုန်တွေ့မြင် ဒီမှာ) ဂျာမနီမှာဖွဲ့စည်းမရ. အဲဒီအစားအစ္စရေးသင်္ဘောများမဟုတ်ဘဲအားထုတ်မှုတစ်ခုသပိတ်မှောက်၏နယ်စပ်ဆိပ်ကမ်းများမှတစ်ဆင့်လူတွေကိုပိုပြီးလှုပ်ရှားမှုမှမဖြစ်စေ.
အခြားဆွေးနွေးရန်ဆန့်ကျင်အဖြစ် Medicks, ထိုစာတမ်းကိုယ်စားပြု, ဣသရေလသည်ဒီမိုကရေစီပြည်နယ်မပေးကြောင်း. ဣသရေလအမျိုးသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပိုင်ဆိုင်မထားဘူး. သာ 51% ဣသရလေလူဦးရေရဲ့အစိုးရကကိုယ်စားပြုနေကြသည်, 49 % ကိုယ်စားပြုမခံစားရဘူး. ကျောင်းများနှင့်ဆေးရုံများမှာ 100 % စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ. လူဦးရေရဲ့ရောစပ်အစ္စရေးအစိုးရကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုသည်, ယင်းမှာတစ်ရွှေ့ပြောင်းခံရ 1,5 သန်းလိုအပ်သောပါလက်စတိုင်းဖြစ်ပါသည်. အစ္စရေးနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်လာအောင်, ကျင်းပ Medicks အစ္စရေးကုန်ပစ္စည်းများတစ်သပိတ်မှောက်အပြစ်လွတ်နေသည်. သူဟာတောင်အာဖရိကမှာအသားအရောင်ခွဲခြားရေးစစ်အစိုးရ၏သပိတ်မှောက်၏အတွေ့အကြုံမှရည်ညွှန်းလုပ်. အဘယ်အရာကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်အတန်းအနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့တရားမဝင်အခြေချနေထိုင်ကြ? အဲဒီမှာထုတ်လုပ်နေသည်ကဘာလဲ, အစ္စရေးကုန်ပစ္စည်းများအဖြစ်ဥရောပစျေးကွက်မှကြွလာ. တဦးတည်းကနဦးနံပါတ်များကို 729 နှင့်အတူဘားကုဒ်မှအစ္စရေးထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြု…
အတိုင်းအတာတခုတခုအပေါ်မှာသဘောတူညီချက်, ကြောင်းခေါ်ဆောင်သွားနိုင်, ဣသရေလအမျိုး၏မူဝါဒမှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှရည်ညွှန်းဖို့, စင်မြင့်များတွင်အောင်မြင်နိုင်မည်မဟုတ်. သိပ်ကွဲပြားခြားနားအရှေ့အလယ်ပိုင်းအာရပ်နှင့်ယုဒလူတို့အကြားပဋိပက္ခ၏အကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြောင်း. ပွဿနာမြားစှာ – ဥပမာ, အဖြစ်. အစ္စရေးနျူးကလီးယားလက်နက် – ရေတိုကာလ၌မိန့်ခွန်းပြောကြားမရနိုင်ခြင်း. သို့သော်ထိုအဖြစ်အပျက်တက်ရောက်ခြင်းများစွာကိုသေးပြသ, ဣသရေလအမျိုး၏ဘာသာရပ်နှင့်အာရပ်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုများလိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်း. သင်တန်းသားများကိုဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည်. Allen ကအဲဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းခဲ့သည်, ပဋိပက္ခဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ကောင်းအများအပြားစဉ်မြေးဆက်လိုအပ်သည်…
podcast: အသစ်င်းဒိုးထဲမှာ Play | ဒေါင်းလုပ် (21.2MB) | embed
အောက်တိုဘာလ 14 ရက်, 2010 | မိမိအ Kottke | Tags:: Braunschweig, ငြိမ်းချမ်းရေးဆုသူ Work, ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လှုပ်ရှားမှု, ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ, ဣသရ, ပါလက်စတိုင်း.
Braunschweig ငြိမ်းချမ်းရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ anti-စစ်ပွဲနေ့…
မနေ့က, anti-စစ်တစ်နေ့တာအတွင်းလူများ၏စစ်သူရဲအပေါင်းတို့သားကောင်များကိုယ်စား, အဆိုပါလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ယနေ့ထားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်လူ့အခွင့်အရေးစစ်ရေးစက်နေမကောင်း-လေးစား Kunduz ၏အာဖဂန်ပြည်နယ်သားကောင်လဲသေကြပြီ, စိတ်ထင်. ကျွန်မနှင့်အတူကင်မရာသုံးပြီးခဲ့သည်…
“တာလီဘန်ရေနံတင်သင်္ဘောကနေခိုးယူနှစ်ခု၏ဂျာမန်တပ်မတော်ဗုံးဖောက်ခွဲမှုများ၏တဦးတည်းကဦးဆောင်မှာ 140 လူထု, ကလေးများနှင့်လူငယ်များအပါအဝင်, အသတ်ခံရ. ဤသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်, အရာထို့နောက်သည်အထိသာမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးအများအပြားများအတွက်သလိုပဲ: ဂျာမဏီစစ်မှာဖြစ်ပါတယ် Kunduz အတွက်ဖြစ်ရပ်များအာဖဂန်နစ္စတန်အတွက်အရပ်သားလူဦးရေဆန့်ကျင်နေ့စဉ်စစ်ပွဲ၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ.
ယင်းဗိုလ်မှူးကြီး, အမိန့်လို့ခေါ်မှလောင်စာဆီထရပ်ကားတိုက်ခိုက်ပေးထားခဲ့သော, ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကတည်းကပြန်လည်နေသည်, စစ်တပ်ကကြေညာခဲ့သည်ပြီးနောက်, သူ့ကိုဆန့်ကျင်စည်းကမ်းတရားစွဲဆိုမှုအစပျိုးမဟုတ်လို.
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အဘို့အနည်းဆုံးရှက်စရာ, လူ့အခွင့်အရေးပှဲအာမခံသော; ကဂျာမဏီ၏ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံနေဆဲဖြစ်ပါသည် (ဆောင်းပါး 1, ရောင်းအား 2):
အဆိုပါဂျာမန်လူမျိုးကိုထို့ကြောင့်တိုင်းအသိုင်းအဝိုင်း၏အခြေခံအဖြစ်မကြူးကျြောနှင့် inalienable လူ့အခွင့်အရေးကိုအသိအမှတျပွု, ကမ်ဘာပျေါတှငျငွိမျးခမျြးရေးနှင့်တရားမျှတမှု၏။”
နောက်ဆုံးပေါ်ယနေ့, စစ်ပွဲများအရပ်သားများအစုလိုက်အပြုံလိုက်မျိုးဖြုတ်သုတ်သင်ရေးအတှကျ ပို. ပို. လည်းဖြစ်လာကြပါပြီဘယ်မှာ, ဒါကြောင့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်, နိုင်ငံရေး tool ကိုအဖြစ်စစ်ကိုအပြစ် တင်.!
ဤသူသည်ငါလုံးလုံး join လို့ရပါတယ်…
စက်တင်ဘာလ 5, 2010 | မိမိအ Kottke | Tags:: Antikriegstag, Braunschweig, ဆန္ဒပြ, ငြိမ်းချမ်းရေးဆုသူ Work, ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လှုပ်ရှားမှု, မိဿဟာယမဟာမိတ်အဖွဲ့.
categories: 2010, ယခု, ယေဘုယျ, Braunschweig | comments: အထူးပြောစရာမရှိ
ဟီရိုရှီးမား / Nagasaki ၏အက်တမ်ဗုံးဖောက်ခွဲမှုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်…
ပင်ပြီးနောက် 65 နှစ်နာရီတစ်ဦးလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ, ယခုနှစ်သြဂုတ်လတစ်လ၏ဖြစ်ရပ်များ 1945 မှတ်မိဖို့. ဟီရိုရှီးမားနှင့် Nagasaki ပေါ်အနုမြူဗုံးဗုံးအခြေခံကျကျကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်. လူသားတို့ကိုကြိုးစားခဲ့, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နေရဲ့ပါဝါကိုသုံးပါ – နှင့်စတိုင်အတွက်zerstörerichsten. အဆိုပါကတည်းက 6. သြဂုတ်လ 1945 လူသားထုအပေါ်မိုးသည်းထန်စွာဆွဲထားတဲ့.
ဒါပေမယ့်အစားအဏုမြူစွမ်းအင်၏ indomitable ပါဝါ၏ဒုက္ခကနေလေ့လာသင်ယူ၏, ဒီခွန်အားကိုတညျဆောကျ ပို. ပို. ပြည်နယ်များရှိ. ဖျက်ဆီးခြင်း၏အာဆင်နယ်အသင်းဖန်တီးခဲ့ကြ, အဟန့်ဒအငြင်းအခုံနှင့်အတူ. ဒါပေမယ့်အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာဖွင့်လှစ်, ကျွန်တော်တစ်ဦးနျူကလီးယားအခမဲ့ကမ္ဘာကြီးအတွက်ရပ်အပေါင်းတို့နှင့်ငါတို့အစွမ်းသတ္တိရှာရန်နှင့်အတူဤရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်လျှင်. အဲဒီမှာအခွင့်အလမ်းများ, ကျနော်တို့ယူရှိသည်… (နမူနာ: လှုပ်ရှားမှု - "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ် - နျူကလီးယားလက်နက်များအခမဲ့")
ငါမှာနောက်တဖန်ကြည့်ရှုသောအခါ, ဝီကီ​​ပီးဒီးယား အဆိုပါဖြစ်ရပ်များ Nachlas, ကျွန်မအနည်းငယ်လိုင်းများသတိပြုမိ:
မိမိအဗုံးခွဲသူ Enola Gay ခဲ့သည်.
အဆိုပါ flash ကို, အ Sturmeswelle ပြီးနောက်
ထိုအ Atom ကိုလည်းအမြိုးအနှယျခဲ့သည်.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအတော်များများမိခင်များ – ဒဏ်ရာရ
နှင့်သေခြင်း – သူသည်အလျင်အမြန် လာ. ,.
ထိုအသွေး – ဒါဟာတိုင်းချွေးပေါက်ထဲကနေ oozed
အဆိုပါဗုံးကိုရပ်တန့် – အဆုံးသတ်ထား
ဗုံးအခမဲ့ – ဒီအကျိုးကိုခဲ့သည်!
သည် PS: နြူကလီးယားစမ်းသပ်အပေါ်တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့သားသမီးရဲ့ဇာတ်လမ်းကဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည် – GAIA – Planet ကိုမှို
သြဂုတ်လ 7, 2010 | မိမိအ Kottke | Tags:: ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လှုပ်ရှားမှု, အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်, ဟီရိုရှီးမား, Nagasaki, အနာဂတ်.
စာမျက်နှာများ: 12နောက်တစ်ခု
Wed Jul 17th 3:02:57 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန် 2019